ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ဆိုက်သည်အနောက်-အဆက္ဗီဒီယိုချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ အလှည့်နှင့်အတူ၊အလားတူ တစ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာဆက်သွယ်ရေး၏လူတို့နှင့်အတူကနန်းပုဂ္ဂလိကပိုင်အပေါင်းတို့သည်အချိန်။ တစ်မူထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်ငွေရှာဖို့အားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး၏အားသာချက်ကိုယူပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများအဆိုပါတွဲဖက်အစီအစဉ်။ ကတည်းကအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းပါရှိသည်ပရိုဖိုင်းလူမျိုး၏ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အမှ၊အဲဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြု၏ဘာသာစကား။ အပေးအတွက်ရုရှားစကားပြောသူတွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်။ သင်၏အားသာချက်ယူနိုင်အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုဝယ်အခမဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမဟုတ်တဦးတည်းပေးဆောင်။ စတင်ရန်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံနှင့်သေချာအောင်ဒိုင်ဖွင့်၊မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်၊ဖွင့်ဆိုချက်အလက်တွေ၊ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ။ သင်ချင်သမျှကို။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်သွားဖို့ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်။ သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၏တဦးတည်းအားဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခဲ့သူအြန္လိုင္းများ၏ရှေ့မှောက်၌ဒုတိယကင်မရာ။ သာအသိအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ခွင့်ပြုဖို့အဆက်မပြတ် ကိုအသုံးပြုပါတယ်ရဲ့။ ဒီအဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်အချို့သောအချိန်-ဤသည်အချိန်၏အမည်၊ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်၊နှင့်စောင့်ဆိုင်းရန်မိနစ်ကိုရှာဖွေဖို့နောက်စကား။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအခွင့်အလမ်းရဖို့ဖို့ဒီကိုသုံး။ ဒါ့အပြင်၊သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ကို၊သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်အမျိုးအစားဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပြောပြချင်သင်သည်အဘယ်သို့လူအကြောင်းကိုငါသိ၏။ လည်း၊မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမည်သင်ဖြည့်စွက်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုအပေါ်အသုံးပွုဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းစကား။ ထို့နောက်ဖွင့်မိန့်ခွန်း။ တချိန်တည်းမှာ၊လူတွေရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာရှိသည်သောသူသူတို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်ရုပ်ရှင်တွေ၊ကိုနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"ခလုတ်ကိုထိကများ၏ရှေ့မှောက်၌သင်ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦး။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၊ကိုထည့်သွင်းဖို့အခမဲ့ခံစားရအမှသင်၏အကြိုက်ဆုံးနိုင်အောင်သင်ကပြန်သွားရန်။ အင္တာနက္ကိုအဓိကအင်္ဂါရပ်များ၏အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောပုံရိပ်အမြင်အပေါ်မျက်နှာပြင်ဗီဒီယို။ အဖြစ်များအတွက်မီဒီယာ၊ နှစ်ခုရှိပါတယ်-အသံနှင့်သံ။ ရွေးချယ်သောအတနင်္လာနေ့၊အထူးသဖြင့်လျှင်သင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်မတတ်ဘူး။ စာသားအားလုံးကိုသတင်းစကားတွေကိုအလိုအလျှောက်သို့ဘာသာပြန်ထားသောသောဘာသာစကားအခြားသူများနားလည်နိုင်။ လျှင်အသုံးပြုသူများထည့်သွင်းသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး၊ဒါကြောင့်အကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသူတို့ကိုတားမြစ်သည်သို့မဟုတ်မရ။အောက်တိုဘာ။သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးသို့မဟုတ်အချိန်သတ်မှတ်၏ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်စာသားမည္။ အဖြစ်အဆက်အသွယ်ပုံစံ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်အတွက်။ အရုပ်ပေါ်တယ်ကမယ်အဖြစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ပျောက်အတွက်မီဒီယာ၊၊စသည်တို့ကို။၊ များသောအားဖြင့်ကြောင်းဟုတားမြစ်ထားသည်။ လျှင်သင်လိုတဲ့ဆန္ဒခံယူပြတ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊သင်လုပ်နိုင်သည်ပြောင်းလဲရန်ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေး။ ဒီအစဥ္အချဉ်းကပ်မှုပရိုဖိုင်နှင့်စကားသည်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးလွယ်ကူစေသည်ကိုရှာပြီး အသိအကျွမ်း။ အတိုင်းအတာ၏အကျိုးခံစားခွင့်ကထောက်ခံအများအပြား။ အများစုကဗီဒီယိုချက်တင်ပါဝင်မည်ပြော:သင်ကကြိုးစားသင့်အဆက်အသွယ်ရသော်လည်း မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အကဲဖြတ်ဖို့အပြုသဘောရှုထောင့်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးဒီအခက်အခဲကြောင့်အလွယ်တကူမြင်သာသောအခြေအနေ။ သငျသညျမပေးရှိပါကချိုးဖောက်တယ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ထို့နောက်မစိုးရိမ်၏အဘန်ကီမွန်းက။ အာမခံ၏ကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းသက်သာသည်ပင်အတူလူများအတွက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ။ မအတော်လေးကိုနားလည်ဆိပ်ကမ်းသတ်မှတ်သုံးစွဲနိုင်စွမ်းအားဖြင့်။ ထို့ကြောင့်၊မိုဘိုင်းဖုန်းမများကိုလက်ခံရရှိ။ အောက်တိုဘာလအောက်တိုဘာလအပြင်၌ရှိခြင်းနှင့်အတူသာယာသောစကားပြောဆိုမှုအမျိုးသားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်နှင့်ပြည်သူများ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၏အလှအပစက်မှုလုပ်ငန်းနိုင်ပါတယ်ငွေရှာတစ်ခုတည်းသောအားဖြင့်ဗီဒီယိုချတ်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အမျိုးသမီးများစွာကိုအသုံးပြုပါတယ်-ရုရှားဘောလုံးသမား၊၏ကလပ်"လက်စွဲကိရိယာများ"။ သင်လိုအပ်သမျှကိုဝင်ရောက်ဖို့နိုင်စွမ်းကို၏အဝက်ဘ်ဆိုက်:အားလုံးသည်မိန်းကလေးများဤအုပ္ပဲယူဖြစ်ခြင်းအတွက်မာနထောင်လွှားပးသည္တွက်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လျှင်သင်အွန်လိုင်း။ သူတို့လည်းအကျမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့လျှင်သင်လက်ခံရရှိတဲ့တိုင်ကြားစာအကြောင်းကိုလက်လှမ်း။ အချက်များအပေါ်ချီးမြှင့်ကြသည်ဤများအတွက်ပေါ်တယ် ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်၊သူတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အမြို့မြို့မှဆုတ်ခွာ။ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေများမူတည်ပြီးအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေခြင်းငှါအပေါ်အသေးစိတ်နည်းလမ်းမည်မျှအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်လက်ခံရရှိကနေအမျိုးသားများအများဆုံးလေးစားဖွယ်နှင့်စာနာသူလူပေါ်ရေတွက်နိုင်၊တစ်အတော်အတန်မြင့်မားသောအဆင့်ဝင်ငွေ။ သဘာဝအလျောက်လိုအပ်သောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဒီမှာသူ့ဟာသူကျင့်ခြင်းလိုအပ်ရှာဖွေဖို့အသင့်လျော်ဆြးေႏြးနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ကိုမှန်ကန်အရောအသက်တာ၏တစ်ဦးအစုံအစည်းအဝေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လိုအပ်သည်အချို့သောအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့များအတွက်လိုအပ်သဘောဆက်သွယ်ရေးမှဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်။ ဒီေျစံချိန်းတွေ့ဆိုက်၊လူတိုင်းအပါအဝင်ကလေးဖုံးကွယ်ထားနိုင်နောက်ကွယ်မှ၏လှပသောမိန်းကလေးဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ၊သင်သည်ဤလုပ်နိုင်ဒီမှာချက်ချင်းကြည့်ရှုသူအပြောနေတာဖြစ်ကြောင်း၊ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေရာယူကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊တဦးတည်းကိုသုံးပါရန်လက်လှမ်းတစ်ဦးကဗီဒီယိုချက်တင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့မဆိုဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကန့်သတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခကြေးငွေ။ ချက်ချင်း ပိုက်ဆံထည့်ဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုထည့်သွင်း၊ရေရှည်၊အကောင်းနဲ့အလျှော့သူများ-ဤတစ်ပြန်အမ်း။ အဖြစ်များအတွက်ပျမ်းမျှပမာဏအခွန်၏၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ဖို့အပင်မရှိဘဲထွက်ခွာသင့်ရဲ့အိမ်၊အရာစာသားအတိုင်းကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ။ ဒါဟာအများကြီးစျေးသက်သာထက်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆောင်ခဲ့ပြန်သင်အကြိုက်ဆုံး၏သောအရာအတွက်ကောင်းသောနေ့စားသောက်ဆိုင်ဘယ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုအခန္းပန်းစည်း။ လည်းမှတ်သားထိုက်သည်၊ဒါကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိမ့်ပြီးလူလုပ်။ တူမှောင်မိုက်အရေပြားသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အသားအရေ။ ချင်ချက်တင်နှင့်အတူစိမ်းပုံမှန်ရုရှားအလှအပ။ ခ်ိတ္ဆက္ပါမြားကိုရှေးခယျြသောရိုက်လိမ့်မည်သင်၏နှလုံးအစာရှောင်ခြင်း။ ငါအကြံဥာဏ်လိုအပ်မှငါ့သူငယ်ချင်းတွေ။ ပိုပြီးအတိအကျ၊ငါကြားဖူးတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေကိုဆွေးနွေးဆြးေႏြးေ၊ကိုယ့်ဒိုင်ယာလော့ခ်အစွန်အဖျားနှင့်ဆွေးနွေးရန်အကြောင်းအသေးစိတ်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သူတို့အဖို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့သိလုံးဝဘာမျှ။ ကျနော်ပထမဦးဆုံးဒီမှာလာထုတ်၏သိချင်စိတ်နှင့်အပြီးတက်ကြွစွာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္သုံးလကျော်။ ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးအစားထိုးဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ စစ်မှန်သောအသက်တာသည်၊ဒါပေမယ့်ပင်အချို့ကိစ္စများတွင်ကူညီရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များငါ့ကိုအတူဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်မှန်မိန်းကလေး။ ငါအနည်းဆုံးသုံးစွဲက်ာ္လြန္ရငါလုံလောက်တဲ့အဆင့်ဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့။ အဖြစ်သက်သေပြဘွဲ့နှင့်ယောက်ျားဖို့ကြိုးစား၊ငါပိုပြီးအချိန်ပေးနှင့်အတူအလှဆုံးအမျိုးသမီး။ အ ဆိပ္ကမ္းခွင့်ပြုပြုမှအကြှနျုပျကိုကဒီမှာငါ့အဆင်ပြေ။ ရိုးသားဖို့၊အဘို့အပိုပြီးထက်ခြောက်လတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရွေးချယ်ဆွေးနွေးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်။ اس ام اس။ အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်မှသာအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုနှင့်ရယ်စရာသတင်းထောက်။ မည်သည့်အချိန်နိုင်ပါသည်သတိပြုရကြမည်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ၏သမီးနှင့်လက်ဆောင်ပြန်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြုံးနှင့်ပို။ ကျွန်တော်ကအမေ။ တွင်ဖွားထွက်ခွာ။ အခါငါသည်တဆိခဲ့သည့်အနိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်။ ငါတွေ့ပြီ။ ဆိုက်ရှာဖွေနေသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်၊နှင့်ခဲ့ပြီးပြီအဖြစ်အသုံးပြုခွင်များအတွက်ပိုထက်နှစ်နှစ်။ အခါ၌ပင်ဆုံးဖြတ်၊ငါသည်ကြ်န္ေဆက်လက်ငွေရှာဖို့ဒီမှာ။ အောက်တိုဘာလအောက်တိုဘာလအပြင်လိုအပ်သည့်ငွေကိုငါရနိုင်ကောင်းချစ်ကြည်ဒါချစ်စရာအသစ်မိခင်သူ သူတို့အတွက်ငါ့သားသမီးဂရုစိုက်။.
ကောင်းစွာ၊သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအတူရက်စွဲတစ်ခုအောင်မြင်? ဤသည်သင်၏မေတ္တာအသက်တာ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်အိပ်ချင်မူးတူး-ဆိုး-မ? ဒါကြောင့်ယခုသင်ရှူရှိုက်နိုင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုသက်ပြင်းသောကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့လမ်းပြန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားမှု! တစ်ပလက်ဖောင်းအပေါင်းတို့ကိုသူတို့အဘို့ ဆွစ်လူမျိုးအဘို့ရှာသောသူအတွေ့အကြုံသစ်နှင့်များ၏အိတ်နှင့်ပျော်စရာ။ ပင်လျှင်သင်ရှာတွေ့ချင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း၊သင်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ရှည်လျားဘို့၊သွားဖြောင့်အမှတ်။ ရှိမရှိအတွက်၊အပေါ်ဖိုရမ်များအားဖြင့်၊မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုတစ်ကောင်လေးနှင့်အတူစစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်:အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ၊သင်ဖြစ်နိုင်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်၏အမြဲစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေရှိသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရက်စွဲနှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အချစ်နေ့စွဲနှင့်အတူလှပသောအမျိုးသမီးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ကျနော်တို့ကိုပူဇော်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်အများကြီးပို။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်ကြားညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းသာပွင့်လင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအလိုအလျောက်။ ပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလပ်ကိုင္မ်ား၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးအားလုံးဇာတ်ကောင်ကနေအမျိုးသားအပေါင်းတို့တိုင်းဒေသဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊သင်သည်လည်းလျင်မြန်စွာတစ်ဦးမိတ်ဖက်မှသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေသ။ သင်ဆဲ၊ဒီနေ့တောင်မှ၊ကျေနပ်၏တစ်ဦးသူနာပြုဖြစ်လာဖို့ဆန္ဒသို့မဟုတ်သူနာပြု။ ယ့်ကိုယ်ကိုဖြားယောင်းခံရ၊ချောင်းနှင့်ကူညီရန်ရောက်ရှိအသစ်အထွဋ်နှင့်အတူ သို့မဟုတ်ချိုမြိန်။ သင်ပြီးသားဒီတော့ဝေး ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုသိလိုသို့မဟုတ်သင်နောက်ဆုံးမှာပါဝင်ပတ်သက်ရယူခြင်း? ထို့နောက်အခမဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်နှင့်ရွေးချယ်သင်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ။ ငါစေလွှတ်မည်ပါလိမ့်မယ်သင်၏ပရောသို့မဟုတ်မစကားပြော၊သင်ပါလိမ့်မယ်ညာဘက်အလယ်၌၏နောက်အဖြစ်အပျက်။ လက်လွတ်မမူဒီအခွင့်အလမ်းများ၊ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုအသက်တာမှာအပွင့်! လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းအဆုံးမဲ့ချိန်းတွေ့ကွန်ယက်၊အများအပြားအခြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပိုင်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်၏အဆွစ်ဇာလန်လိင်ချိန်းတွေ့ကြန္ယက္၊သင့်ပရိုဖိုင်းကိုပြသလိမ့်မည်အလိုအလျှောက်နှင့်ပေါ်တွင်အခမဲ့အလားတူအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်အလားတူအဖွဲ့ဝင်များ၏အဆုံးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများချိန်းတွေ့။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျ။
လူတစ်ဦး၏ဗဟိုအတွက်အာရုံစိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာမိသားစုဟိုတယ်ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အမျှစုဆောင်း၏ဂန္ထဝင်နှင့်ခေတ်မီပုံစံများနှင့်။ များထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ထုတ်လုပ်သန့်အရည်အသွေးမြင့်မားထည်နှင့်ပစ္စည်း။ သင်တို့၏သက်သာရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင်နှင့်အတူအကြံဉာဏ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ အားလုံးပြီးနောက်၊လိုအပ်သလိုချိန်ညှိအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွမ်းယိုလိမ့်မည်ချွေတာ။
အတွေ့အကြုံနှစ်အတွင်း၌ဒိန်းမတ်။ ပျော်စရာများအတွက်အားလုံးအသက်အရွယ်။ ဘဲကန့်သတ်။ ရီးရဲလ်ရုပ်ပုံများ
ချိန်းတွေ့မှာမည်သည့်အသက်အရွယ်ဖြစ်နိုင်ခဲတဲ့အလုပ်တခုကို၊နှင့်ချိန်းတွေ့လေးဆယ်ကျော်မဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်။ လူသန်းပေါင်းများစွာဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အသီးအသီးအခြားအဖို့ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ထိုမေးခွန်း၏နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးနောက်အရက်လေးဆယ်လွန်ဖြစ်လာသည် အရေး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးသည်လူလေးဆယ်ကျော်၊ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အထီးကျန်၏၊သင်ချင်တယ်ဆက်သွယ်ရေး၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ပဲစတင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ထိုအခါချိန်းတွေ့ကလပ်ကြသူလေးဆယ်ကျော်-သည်အဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေပါ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကြသူလေးဆယ်ကျော်ဤသည်ကြီးစွာသောနေရာကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အထူးသဖြင့်ရှိလျှင်၊သင်အနည်းငယ်ရှက်သို့မဟုတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိအပေါ်ခရီးဦးကြိုပြုလမ္း၊စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်။။ ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြိုးစားရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အလမ္းလူအစုအဝေး။ ချိန်းတွေ့အတွက်ကလပ်ကြသူလေးဆယ်ကျော်၊သင်ရနိုင်အကျွမ်းနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့သူတစ်ဦး၊ပင်မထွက်ဘဲနေအိမ်။ ဒီနေရာမှာကောက်ခံသည့်ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စများ၏အရည်အသွေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးလေးဆယ်ကျော်တို့တွင်အဘယ်သူသေချာရှာဖွေဖို့အချစ်တဦးတည်း။ ၿမန္မာကိုပထဝီသဘော၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၊နှင့်အလားတူအကျိုးစီးပွား၊အသက်အရွယ်၊၏ပြည်နယ်။ လုံလောက်သောကြောင့်ရွေးရန်ပုံစံရှာ၏လိုအပ်သောအရည်အသွေး၏အလားအလာမိတ်ဖက်။ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်လဲအတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အသက်၊ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမဟုတ် လူကိုငါကချစ်ရ။ အခါလေးဆယ်ကျော်၊အားလုံးတွေ့မြင်ရာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ သငျသညျမရှိတော့စိတ်ဝင်စားတီ၊ကခုန်နှင့်သောက်သုံး။ သင်ရှာနေနေကြတယ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအခါမ်ားလူတစ်ဦးဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်။ ကံမကောင်းသောအချက်ကြောင့်ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့အသက်အတွက်ခေတ်မီနည်းပညာ၊အစည်းအဝေးတစ်စုံတစ်ဦးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ မကြောင့်ကိုအသက်ကျော်ကလူအနှစ်လေးဆယ်ဖြစ်လာပြီးသတိပညာနှင့်သောကြောင့်၊ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်ထိုင်ဖို့မှာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တီနှင့်ဖြည့်စွက်အနတ္တအသက်တာ၏အနတ္တရုပ်သံစီးရီးသို့မဟုတ်ပြသ။ ဒါကြောင့်သတ္တိရှိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင်ထုတ်ကြိုးစားရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖန်တီးခဲ့၊အထူးသဖြင့်အကူအညီလူလေးဆယ်ကျော်ရှိသည်ဖို့ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ အာ္ဘယ်သူမှအဘယ်သို့သိနိုင်လှည့်ဒါဟာယူလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်၊သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်အထက်အသက်အနှစ်လေးဆယ်-ဒီမဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်၏အသက်တာကျော်-ဒါကြောင့်ကိုယ့်နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုအခန်း၏သင့်အသက်တာပြင်ဆင်နေသည်။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး လေးဆယ်ပြီးနောက်ရှာတွေ့ချင်ကြပါဘူးဒုတိယတစ်ဝက်အတွက်ဒီအသက်အရွယ်ကြောင့်၊အများအပြားအကြောင်းရင်းများ။ အချို့သောကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်တစ်နည်းနည်းနဲ့ထိခိုက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူကလေးငယ်များကြောင့်၊အချို့သောပြီးသားရှိပါတယ်၊အခြားသူများရုံမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့်ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မေးသင့်ကိုယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်း-ဘယ်လိုအများစုကအသက်တာတွေရှိလဲ? အဖြေတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အချိန်မဖြုန်းတီးကြပါနဲ့အသက်ရှင်ဖို့။ ခြေလှမ်းယူနှင့်သင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ လူလေးဆယ်ကျော်ဘူးရှာဖွေနေစတင်ရန်ဘယ်မှာသိသည်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို၊သို့သော်၊သင်သည်ထိုဆောင်းပါးဖတ်၊ဒါကြောင့်သင်တဦးတည်းသောသူတို့၏အတွေ့နေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းကို။ အခုတော့၊သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးတယ်တဲ့ပရိုဖိုင်းအတွက်ချိန်းတွေ့ကလပ်ကြသူလေးဆယ်ကျော်။
အခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်-မိုးေဘုတ်အ ဘဝအတွက်အဖုံး၏ ကောင်းကင်တမန်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများအတွက် ဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဓါတ်ပုံမပါဘဲ။ သည်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ လတ်ဆတ်သောပုဂ္ဂလိကကြော်ငြာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျွမ်းနှင့်အတူ အခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးအသုံးပြုသူများ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအခမဲ့ကြော်ငြာ၊အမွတ္ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီ၏ဓါတ္ပံုမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး၊။ ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ႏွင့္နှင့်အခြားသူများ။ အကြံပြုချက်များဖို့ရှာဖွေနေကြသူကလူကိုဆွဲဆောင်များအတွက်နေအိမ်များအတွက်စုံတွဲများ၊သူရှာဖွေနေပါတယ်ဘယ်သူသည်လူများအဘို့မှန်မှန်ခရီး မုန့်ဖုတ်မယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အသစ်ပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံအစဉ်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်အခမဲ့ကြော်ငြာ၏အ ။ အဘို့ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့တစ်မြို့နာမည်၊သတင်းအချက်အလက်ပုံနှိပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့၊ဓာတ်ပုံများ၊အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များ၊ဖုန်းနံပါတ်ကို၊စသည်တို့ကို။ ယေဘုယျအနေဖြင့်၊၊ရေခဲသေတ္တာ၊အီးမေးလ်နှင့် ၊ဝွချစ်သောအရာတို့ကိုအချိန်အများကြီးယူ။ အားလုံးအမျိုးအစားများနှင့်အခန်းကဏ္ဍများရှာကြသည်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်၏။ အားဖြင့် ကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊သတင်းစာများ၏ဤဘာသာရပ်နှင့်လည်းရှိပါတယ် ဒေသခံတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကအတွက်ကျယ်ပြန့်အသက်အရွယ်ကနေအလိုရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၏သိသာအရေအသုံးပြုသူများ။ မကြည့်ဘူးအဘို့အပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအတွက် ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများ၊သွယ်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ် ၊ရေခဲသေတ္တာ၊အီးမေးလ်သို့မဟုတ် ။
"ဘယ္လိုကစားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့"။ -နည်းလမ်းများကို။ ေမး
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပျော်စရာနှင့်လွယ်ကူပါတယ်။ သို့သော်၊၏အန္တရာယ်ရှိနေပါသည်ဆင်လာသောအသွင်တူဆက်သွယ်ရေးများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အသုံးပွုနိုငျလှ (ဆွဲဆောင်မှုဆီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်မှန်)သီချင်း(ဓါတ္ပံု၏အလှမှာအထင်ရှားစေခြင်းငှါ)။ သို့မဟုတ်၊ရုတ်တရက်၊အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအစည်းအဝေးအောက်ပါအတိုင်းအရှည်။ ၎င်း၏ပန်းပွင့်ပွင့်ကြသည်။ အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များဝှက်ထားသောနေကြတယ်သို့မဟုတ်လှည့်။ သင်ရုံလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ထွက်ပေါက်အွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီ။ အဘယ်သူမျှမ။ သင်သာပြင်ဆင်မှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ေဟက်ကာ၊သတိပြုမိသင်လွှဲပြောင်းသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ(နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ကဒ်)ဖြင့်-ပင်လျှင်သူတို့ စေလွှတ်ပြင်ပမှသင့်နိုင်ငံ၏မူလအစ(အာမခံ)ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကအပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ဒါကြောင့်၊လက်နက်အတွက်၊လုံခြုံမှုအကြံပေးချက်များ၊ဤချိန်းတွေ့အေဂျင်စီ၏ရွေးချယ်မှု၏။ အဘယျသို့အသုံးပွုဖို့။ စွမ်းဆောင်ရည်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကလိုချင်တယ်ဖြစ်စေမ။"၃၅"ခွဲခြားသုံးနိုင်မည်မဟုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကျော်ပြည်သူ့ ၃၀၊အဘယ်သူသည်အဓိကပရိသတ်၏ဆိုက်။ အများကြီးရှိပါတယ်ပရိုဖိုင်းနှင့်ရင်းအမြစ်များ၊နှင့်မည်သို့မှထုတ်ပြန်သောသစ်များဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းခံရ။ သို့သော်၊ရှိမဖြစ်စေခြင်းငှါတစ်ဦးပိုလျှံအသုံးပြုသူများ၏။ စစ္တမ္းပျောက်ဆုံးနိုင်ပါသည်။ သန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ပေးအပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေကိုစောင့်ဘီးလှည့်နဲ့အရေးအဖြစ်အများကြီးသင်တတ်နိုင်သမျှ:"ဟိုမှာ။ ငါမေတ္တာရှင်တာပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်:"လူဆဲလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့သူတို့ရဲ့သတ္တိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစား၊နှင့်ချက်ချင်းကြောင်းထင်ရှိရင်းမှန်ရည်ရွယ်ချက်ဖန်တီးရန်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ ဒီအလေးအနက်။ ဒီအွန်လိုင်းရနှင့်စက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်။ ဖောင်ကိုဖြည့်ပြီးတော့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ကျွန်းနေထိုင်နိုင် ။ သင်သည်လည်းကစားပျော်မွေ့ပါ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအွန်လိုင်း။ ဒါဟာလည်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်ပြီးပထမဦးဆုံးအမှုအရာသငျသညျပွုနိုငျ။ အမှု၌သင်တို့ကိုပိုက်ဆံအများကြီးရှိသည်၊သင်ချင်သောသေချာအောင်သင်ပေးဆောင်နိုင်ကြသည်။ ငါသည်အဘယ်သို့သိရကြဘူး။ ကျွန်တော်မသေချာလျှင်သင်ကြားဖူးတယ်၏။ ဒီအတွေ့အကြုံ။ မတစ်ခုတည်းမည္အင်တာနက်ပေါ်မှာအများမဟုတ်ပါဘူးနှင့်အတူစတင်"လှည့်ကွက်"ဒီလို"မဂၤလာပါ၊ဆံုခင္ဗ်ာ။"နိမ့်ကျအာရုံစိုက်နှင့်ဒိုင်(လျှင်မ၊သို့ဖြစ်ကြိုးစားရှာဖွေနေချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အဖြစ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၊ဥပမာအားဖြင့်။ ကျနော်တို့ဟာပုံမှန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေတက္ကသိုလ်၊မြို့နှင့်ကျွန်တော်ကိုချစ်အစည်းအဝေးတက်။ ပထမဦးဆုံးပြဿနာသည်။ ဒုတိယ၊မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒုတိယအ၊သင်သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဘေးအိမ်က၊သို့မဟုတ်သင်ခံရဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဗန်။ ဆက်ဆံရေးတူ အမျိုးသမီး၊ကျားမ၊အသက်အရွယ်-ဤတံဆိပ်များဖြစ်ကြ၏ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုနှင့်ဇောကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့လိုအပ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်တုန်းကကျွန်မသည်၊ဖိုင်အဘို့အပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအနေနဲ့ပြည်တွင်းလူမှုကွန်ယက်၊အရာမကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်အားဖြင့်မှီဝဲသောတရုတ်ကျောင်းသားများနှင့်။ ကိုယ့်အတွက်သူတို့ရဲ့စကားပြောဆိုချက်၊တစ်ဦးချင်နေကြတဲ့မေးခွန်းအလွှား။ အဘယ်အရာငရဲလုပ်ခဲ့ကြဘူး၊ငါသည်အဘယ်သို့ပြုလုပ်ခဲ့။ နှင့်ဖြစ်စေမည်နည်း။
ရုရှားချက်တင်ကစားတဲ့တစ်ခုအံ့သြဖွယ်တီထွင်ဖို့ခွင့်ပြုသောဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလူအမျိုးမျိုး၏အစိတ်အပိုင်း။ ကျေးဇူးတင်စကားမှလူကြိုက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၊သငျသညျအစဉ်ကို၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသို့မဟုတ်အထီးကျန်မှုမရှိခြင်း။ ယနေ့အခါ၊လူမျိုးခွဲခြားပြီးလူတိုင်းဘဝမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ၊တစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်နိုင်ပါတယ်အတူတကွလူကိုရောက်စေဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်၊သို့မဟုတ်ထင်မွာပါ။ သင်မြင်သောအခါအပေါ်ခရီးသည်မြေအောက်ရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးသူတို့ကိုဆင်းထိုင်နှင့်အတူသူတို့၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးများအကြားလူမျိုးပျောက်ကွယ်သွား။ အဘယ်သူမျှမသူတို့မသိခဲ့ပါဘူး။ အချို့တို့သည်အရှက်၊သူမ်ားေတြအလုပ်များအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်အွန်လိုင်း။ စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအစားထိုးတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးများအကြား။ ကျေးဇူးတင်စကားဤဝန်ဆောင်မှု၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြေရှင်းဖို့အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ။ ရှာတဲ့သဘောဖော်၊အကြောင်းပြောဆိုသင့်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာပြီးလျှင်သင်ကံကောင်းတွေ့ဆုံစစ်မှန်သောအချစ်။ တိုင်းအသုံးပြုသူ၏သူကမ်မိုက်ဘူးသိကြိုတင်မဲအတွက်အဘယ်သူသည်သူတို့အမည်နှင့်ဆက်သွယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ် အသုံးပြုသူအတွက်အသုံးပြုအရေအတွက်နည်းလမ်း။ ထိုသို့အစဉ်အမြဲ ခြင်းနှင့်ဖန်တီးပေး။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ သူသိတော်မူသောသူမည်နှင့်ဆက်သွယ်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ပါသည်အချိန်မရွေးထိုနေ့၏၊သင်အသုံးပွုနိုငျအခမဲ့။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဓိကအားသာချက်။ အတွက်၎င်း၏အလုပ်၊အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုစဉ်အလာကစားတဲ့နိယာ။ အဘယ်သူမျှမကြိုတင်မဲအတွက်သိတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ အားသာချက်ရန်အတွက်တည်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအသီးအသီးအချိန်အသုံးပြုသူအများကြီးတွေ့အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာ ၊လေ့လာတစ်ခုခုအသစ်အရ၊အများကြီးအပြုသဘောစိတ်ခံစားမှု၊အစိမ်းတွေနဲ့အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သူမိတ်ဆွေဖြစ်လာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အများအပြားရှိပါတယ်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများအလွန်လူကြိုက်များ။ သူတို့ကူညီ၊သင်သာဖယ်ရှားပစ်ရအမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးသော၊ဒါပေမယ့်လည်းရှာတဲ့တကယ့်မိတ်ဆွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ ပါကရရန်ခက်ခဲသည်ကျွမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်ကူညီလိမ့်မည်ဖယ်ရှားပစ်ရအမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးသော၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်ဆက်သွယ်လုံခြုံစိတ်ချနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါစိမ်း။ ထို့အပြင်၊အဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုသည်မဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းတတ်နိုင်သမျှမပါဘဲ မှတ်ပုံတင်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဤအအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆက်သွယ်ဖို့အပေါ်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်မပါဘဲကိုစွန့်ခွာ။ ဤသည်အကောင်းနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အထီးကျန်။ ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်စုံတွဲများနှင့်မိန်းကလေးများလည်းလူကြိုက်များ၊ျချိန်းတွေးအခေါ်အပေါ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာ။ လျှင်တစ်ဦးကမိန်းကလေးရှိပါတယ်ကိုယ့်အလှည့်ရှစ်၊သူမအနိုင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အကြောင်းသူမ၏ခေါင်းစဉ်။ ဆက်သွယ်ရေးကူညီလိမ့်မည်လူငယ်အမျိုးသမီးကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့၊တစ်ဦးသာယာသောအဖော်များအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ထို့ကြောင့်၊အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ခွင့်ပြုကြောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကောင်လေးတွေဟာတို့တွင်အအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊န်ဆောင်မှုများအဘို့အသီးအရသာဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်ဟုပင်အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုမှုများအသုံးပြုသူများ။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်ရွေးချယ်သောဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးအကိုက်ညီဆုံးအသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထား။ သင်သာသေချာပါဤသည်အံ့သြဖွယ်တီထွင်မှုလိုလူတွေအတွက်အားလုံးထောင့်တိုင်းပြည်၏ပေးသည်တဲ့အကြီးအခွင့်အလမ်းကိုဆက်သွယ်ဖို့နယ်နိမိတ်မရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မ။ အားလုံးအတွက်လူငယ်လူ၊ရှိသောသူတို့အဘို့ပြီးသားလှည့်ရှစ်-ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့စာန်၊သူတို့သွားလေရာရာ၌။ တဦးတည်းအများအပြားအားသာချက်များကိုဝန်ဆောင်မှုသင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်နှိပ်ပါ"စတင်"ခလုတ်ကိုစကားစတင်။ ကွန်ပျူတာရွေးချယ်အ ၊အသုံးပြုသူသာရွေးချယ်စိတ်ဝင်စားစရာ နှင့်အသုံးဝင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံး။ သင်ကမကြိုက်ကြဘူးလျှင်စကားပြောဆိုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးသင်ဖို့ပြောနေတာခဲ့သည်ပျင်းစရာသို့မဟုတ်လြန္ကဲကိုနှိပ်လိုက်ရုံသွားခလုတ်ကိုနှင့်သင်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်အပေါ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အလွန်အသုံးဝင်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေသော။ အမှန်တကယ်စည်းအဝေးခက်ခဲသည်ပြောင်းလဲဖို့မိတ်ဖက်ဒါကြောင့်အလျင်အမြန်။ အသုံးပြုသူအများအပြား၊ဤသည်သာအမှန်ကိုရှာဖွေရန်လမ်းအကောင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရစကားပြောဆိုရုံအဖြစ်အလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူ။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအုပ်ချုပ်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်အသုံးပြုသူများ'တောင်းဆိုမှုများ။ အမွတ္ကဲ့သို့မဟုတ်သယံဇာတရင်းမြစ်ကနေဒါ။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဉ့်အဘို့အအခမဲ့-ဒါဟာအများကြီးစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေထက်နှင့်ဆက်သွယ်သင့်ရဲ့ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်နှင့်မမြင်ရ။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာအနှံ့၊လူတွေရဲ့မိသားစုဝင်များအားဖြင့်ကိုက်ညီ။ ဒီအကန့်သတ်ကြောင်းစေသည်အဆိုပါလူမှုကွန်ရက်မဟုတ်အတိအကျနေရာလို့လူတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပါ။ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရုရှားကစားတဲ့အုပ်စုအထောက်အကူပြုကြောင်းအတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအစိမ်း။
ဤသည်ဆက်သွယ်ရေးနယ်စည်းမခြားခြင်းမရှိဘဲ၊အချိန်ဘောင်အရေအ ။ အများစုကလုပ်ငန်းရှင်များ၊အခမဲ့အချိန်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အလုပ်များအချိန်ဇယားတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများ၊လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဖော်သို့မဟုတ်အဖော်များအတွက်ချမ်းသာကုမ္ပဏီ၊ပင်စဉ်အတွင်းနေ့လယ်စာစားသို့မဟုတ်ပြီးနောက်လက်မှတ်ထိုးရေးစာချုပ်။ စုံတွဲများလည်းရှာအခြားစုံတွဲများကိုမျှဝေသောသူသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အကျိုးစီးပွား။ ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုကျော်လွှားရန်နိမိတ်ဆောင်ခဲ့။၊လူပိုမိုနီးကပ်၊သက်သာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်များ၏အထီးကျန်နှင့်အလုပ်အသက်ပိုပြီးပျော်စရာနှင့်သာယာသော။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အပေါင်းတို့ကောက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကနေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့။ ရွေးချယ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။.
။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ ဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူး၊ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်၊အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီဒီနေရာမှာအတွက်လူတစ်ဦး အတွက်။ အမလေးကျွန်တော်တွေ့အမည်ရှိ ။ အဲဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အရေအတွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လတ်တ၊လက်ခံအတုအကောင့်ကို။ ဒီစနစ်နှင့်ဆက်ဆံရေးအသီးအသီး၏ပြည်အရေးအတွက်စံချိန်တင်။ ဖြစ်နိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တစ်က်ဘ်ဆိုက်၊အရာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်မှတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါယာ။ အဒိအမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဆိုက်မှာအကောင်းဆုံးဒိန္း။ ဒိန်းမတ်အမျိုးသားများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးသည်၊သင်တစ်ဦးသည်ရှာဖွေခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုချစ်သို့မဟုတ်တောင်မှကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်တို့မှာဒိန်းခင်ပွန်းဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြေညာချက်များအစည်းအဝေး၏၊မသာအတြက္။ ဒိန်းမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဒိ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ဒိန်းမတ်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့အဒိအမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဆိုက်အကြီးဆုံးအခြေစိုက်စခန်း၏စံမ်ားအမှန်သုံးစွဲသူများ၏၊နှင့်လေထု၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးရှာဖွေ၊သင်နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရှိသောနေရာတွင်ဒိန်းည့်နေရာကိုအမျိုးသားများအားလုံးသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအဖြစ်မှန်သို့လှည့်ဒိန်းမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်မူထူးခြားတဲ့ရှာစုံတွဲများ၊သင်လိုအပ် ကိုယ့်ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာကမြင်ရပါလိမ့်မည်အခြားလူများနှင့်နိုင်ရေးအတွက်သင်ဒိန်းအမျိုးသားများဝက်ဘ်ဆိုက်၊စကားပြောမပါဘဲနယ်၊လူမှုရေးနှင့်ကြည့်ရှုများအတွက်စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်းများ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအမြဲသင်အထောက်အကူအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နေရာချထား၏ကြော်ငြာများအခမဲ့အဖြစ်ရှာ၏ဒုတိယထက်ဝက်အဘို့ဒိန်းအမ်ိဳးဒိန်းမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဒိန်းအမ်ိဳးဒိန်းအမ်ိဳးဒိန်းအမ်ိဳးဒိန်းအမ်ိဳးဆိုဒ်ကကိုယ့်ထက်ပိုအက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အကြီးတစ်ခုလုံးကမ္ဘာအထောက်အကူချိတ်ဆက်ဖို့အတူသင်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေ၊ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသူတို့ရှိသည့်နေရာကိုအသုံးပြုခြံသို့မဟုတ်အခြားမြို့၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားနိုင်ငံ၊သင်အမြဲရှာတွေ့နိုင်မည်အသီးအသီးအခြား၊သင်သည်သင်၏မေးခွန်းလွှာကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ချိတ်ဆက်ဖို့နှင့်လှည့်ပတ်အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒိန်းမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဆိုက်ပေါ်ကိုပြမည်ဟုအလှန်မြေပုံမြို့၊အားလုံးသင့်ရဲ့မေတ္တာ၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အံ့သြဒိအမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ချစ်ရသူအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လူတွေကိုဝေမျှသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အမြင်အတွက်ဒိန်းအမ်ိဳးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသော၊အဖြစ်ရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်၊အရာအားလုံးကိုသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌၊အခမဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်ရန်ဒိန်းမတ်။
ကျနော်တို့စုံစမ်းပြီအကောင်းဆုံးတစ်ဦးတစ်လဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးအသေးစိတ်အတွက်သင်တို့အဘို့အတင်ဆက်သူပါ။ တရာ။ အားလုံးပေးကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အသုံးပြုသူများ။ ကံကောင်းပါစေသင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူ! ဖြည့်စွက်ကာ၊ကျနော်တို့မှန်မှန်ပြုလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဒေသခံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကလပ်များအတွက်ပိုကောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသုတေသန:အကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအမျိုးမျိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကူညီရှာဖွေအကောင်းဆုံးအတည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်များ၊သင်တန်း၏၊လုံးဝအခမဲ့အဘို့။ တြက္ႏအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပံ့ပိုးပေးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်၊သို့သော်-ပွင့်လင်းအစိတ်အပိုင်းများပူဇော်။၊အရွေးချယ်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးတစ်ဦးတစ်၊ကြောင့်နီးပါးမဖြစ်နိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပွင့်လင်းလာတစ်ဦးတစ်ဖလှယ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်အောင်လုပ်ပါဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသင်တို့အဘို့အရွေးချယ်။ ဒီအဆုံးစေခြင်းငှါ၊အသီးအသီး၏လဲလှယ်တစ်ဦးတစ်တင္ၿအသေးစိတ်အယ်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အတွေ့အကြုံနှင့်ရလဒ်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်အွန်လိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဘာသာျပန္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ား။ အားလုံးအချက်အလက်၊အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်း၊အမျိုးအာမခံမရှိဘဲနဲ့။
တစ်ခုတည်းယောက်ျားဒိန္းသူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်ချင်၊ချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်"တွင်ချိန်းတွေ့ဒိန္း"။ အက္ပ္တွေ့သင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ထံမှဒိန်း။ စောင့်ရှောက်နှင့်တကွအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအနီးအနား။ ရှာဖွေမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ဒိန္းယနေ့။ ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း၏။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒိန်းမတ်။ ဒီနေရာမှာရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအတွက်လူဒိန္း။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဒိန္းဖန်တီးရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစု။ မေတ္တာကိုရှာတွေ့ဒိန္း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။
ချက်တင်ကစားတဲ့အများဆုံးရေပန်းစားသည်ရုရှားစကားပြော၊သင်ပထမဦးဆုံးအတွက်မျက်စိ၏။ သင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ကြာချိန်များအသစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်မယူဆပါနဲ့၊မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားများအဖြစ်အသွင် ။ သုံးစံ၏အင်္ဂါရပ်များကောင်းတစ်ခုသီချင်းအတွက်စကားပြောသာအသီးအသီးအဘို့အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာကစားတဲ့ဆိုက်များ၊အပုံများ၏လှပသောရုပ်ပုံတစ်ချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောစကားပြောလီေမ ဒါကြောင့်အများကြီးအခမဲ့ထည့်သွင်း၊သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်များမှသင်၏မိတ်ဆွေစာရင်း။ အများစုကနေထိုင်သူများ၏ဇက်သားသဘောပေါက်ကြောင်းအသံုုးခ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊အဆင်ပြေ၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဒါဟာသုံးပါရန်၊ကျနော်တို့မတောင်းတစ်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်၊သင်သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှပျော်မွေ့။ ကောင်းစွာ၊ဒီအအလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်မည်သူမဆိုများအတွက်၊မခွဲခြားဘဲကျားမ၊အသက်အရွယ်နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း။ မိန်းကလေးများပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ရှိသူ၏အဆင့်အတန်း။ ကအတိုကောက်မှထွက်သမျှသောချက်တင်နှင့်ထူးခြားသောကမ်းလှမ်းအခွင့်အလမ်းပဲ။ အမည်မသိကစားတဲ့စကားပြောသည်လှပသောစကားပြောသီချင်းကိုကျပန်းဖန်တီးပေးပါသည်ရုရှားစကားပြောပရိသတ်များ၊သွားဖို့အပိုင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသီချင်းကိုအပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်သောအမူအမည္မေ၊ကစားတဲ့ချက်ချင်းိပထမဦးဆုံးအ ။ စိတ်ဝင်စားစရာနှင့်အသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုမှမထွက်ခွာရန်သင့်အိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အရည်အသွေးမြင့်အစည်းအဝေးနှင့်အဖြုန်း၊သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအသုံးပြုသည်၊ဗီဒီယိုစကားပြောဇက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်ကိုနှင့်ပိုနေ့တိုင်းဖြစ်နိုင်ချေ၏အပြည့်အဝ-မ်က္ႏွာကိုနားထောင်တင့်တယ်သီချင်း။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်မ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့များအကြားရေပန်းစားသည်င္ငံျခားသားမ်ားအပေါ်အမေရိကန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အများအားဖြင့်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါရွေးရက်စွဲတစ်ခုရှိသည်ကြောင့်၊သူတို့ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အသက်အရွယ်အညွှန်းကိန်းများ၏အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစု။ သင်သွားဖို့ဆိုက်နှင့်ထွက်ရှာတွေ့မှအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါ။ ဒီဆိုက်တွင်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်လက်ထပ်ဖို့အလုပ္လုပ္ခြနိုင်သူအတွေ့အကြုံကိုများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလက်ထပ်ပြီးနိုင်ငံခြား။ သူကတစ်ဦးအလွန်အဆင်ပြေနှင့်အံ့သြဖွယ်။
ဆက်သွယ်ရေးအရေးပါလိုအပ်ချက်များ လူတစ်ဦး။ ချက်တင်ကစားတဲ့-သက်သာနှင့်နည်းပညာအဆင့်မြင့်နည်းလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့အများအပြားမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကနေတဆင့်ဗီဒီယို။ စီမံကိန္းကိုအတူတကွယှဉ်၏အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြီးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေသောခဲ့သည်၊တောက်တောက်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။ ချက်တင်ကစားတဲ့နည်းလမ်းများစွာ၌သာလွန်သောစွမ်းရည်များ၏စံချက်တင်၊အ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူမျက်စိ၊မျက်စိမခြောက်သွေ့မပါကန့်သတ်။ အမှု၌သင်စိတျထဲမှာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အဖော်၊သင်အမြဲလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအတွက်အသက်ဝိညာဉ်၊သင့္ရဲသူကိုအသုံးပြုသူများအဆင္ေအွန်လိုင်း။ ထို့ကြောင့်အမည်၏အချက်တင်ကစားတဲ့ကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိယမ်၏အံ့အား(သင်ဘယ်သူသိဘယ်တော့မှမလိမ့်မည်သင်ပြိုလဲအတွက်လာမည့်ဒိုး)။ ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အကြီးလုံးဝအမည်မသိ၊ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများဆောင်ရွက်နိုင်ပါမ့်(အကြောင်းပြချက်အတွင်း၊သင်တန်း၏)စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းအရာကိုသူတို့စဉ်းစား။ အချို့စကားပြောဆိုချက်အပေါ်ကစားတဲ့ကျက်သရေ လူတစ်ဦးသည်ထင်ရှား၏၊သူဖော်ပြကိုယ်တော်တိုင်အဖြစ်သူတကယ်ဖြစ်ပါသည်၊အရာသည်မမြဲဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့အတွက်ပင်ကုမ္ပဏီ၏ချစ်ရသူ။ ချက်တင်ကစားတဲ့အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အရေအတွက်၏အားသာချက်များကိုပုံမှန်အတိုင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။ စတင်များအတွက်အလုပ်မှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိသည်မဟုတ်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသော။ ကိုယ့်အလှည့်တွင်ကမ်"ရှာဖွေရင်းအမြစ်"။ အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမဝှကျထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးချိတ်ဆက်နီးပါးချက်ချင်း၊ထို့အတူရှိသမျှဖြတ်သန်းနေ့ကအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုတိုးပွားလာအတူတကွအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူအသစ်အသုံးပြုသူများ။ ချက်တင်ကစားတဲ့ရိုးရှင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းမှနေ့စဉ်လူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်မှလူသစ်။ လူအများစုဟာရှာတွေ့ဖို့ခဲယဉ်းချဉ်းကပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်လမ္းနှင့်ပူဇော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ဒါရိုင္တ-မအားလုံးစတိုးဆိုင်စိတ်ထားရှိကြ ၊အများအပြားလူမှုရိုက္ခ်ိဳး၊နှင့်အတူလူစိမ်းအသီးအသီးအခြား။ အထွန်း၏လူမှုကွန်ယက်ရှိရှင်းလင်းချိန်းတွေ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ဒါပေမယ့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းသည်-အများဆုံးအသုံးပြုသူများအနှုတ်ရှိနှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စက်ဝိုင်း၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းမှတကယ့်ဘဝအသစ်အဆိုပြုချက်များကိုသတိထား။ သာ ၊အခြေအနေကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်-လူခရီးကိုအတူတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှဖြည့်ဆည်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို အမည်မသိလူကနေတဆင့်။။။။။ အတူျပဳျပင္ၿဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူလူအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူရောနှောဖို့။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည်နှင့်အညီတစ်ဦးချင်းစီအရသာ၊ဦးစားပေး၊စိတ်ထား၊ဇာတ်ကောင်။ မကြာခဏပထမဦးဆုံးအထင်အဖြား၊နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေအလေးအတွက်စိတ်ဝင်စားသည်။ အမှု၌ချိန်းတွေ့၏လမ္းေ ။ ကွန်ရက်၊ထွက်ရှာဖို့သာပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်နှင့်ထားခဲ့ပါနှင့်အတူမသင့်တော်လူမည်ရန်ရှိသည်တစ်ခုမနှစ်မြို့ဖွယ်။ သာချက်တင်ကစားတဲ့သင်ရိုးရှင်းစွာအနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"နှင့်လာမည့်ဒုတိယအတွေ့ပါမယ်အသစ်ရဲ့အဖော်။ မည်သည့်အပေါ်မှာချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိကျွမ်း မြန်တဲ့။။။။။ ထွန်းနှင့်အတူချက်တင်ကစားတဲ့မရှိတော့မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ပေါ်အချိန်ဖြုန်းဖို့ခြောက်သွေ့ပြီးငွီးစာပေးစာယူနိုငျသောကွောငျ့သင်ချက်ချင်းမြင်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ။ ဖြည့်စွက်ကာ၊အတွက်ကွန်ယက်များ၏ကြီးမားသောအရေအနေကြသည်သောသူတို့အဘို့မဟုတ်သူတို့တကယ်နေသောအသုံးပြုခြင်းအတုအကောင့်အသစ်များ၏နှင့်အတူအခြားလူများ၏အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများ။ အတွက်၊ဒီအပြုအမူဖြစ်နိုင်-ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖောက်ရဲလ်-အချိန်။။။။။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုဗီဒီယိုချက်တင်တင်းကျပ်စွာစည်းမျဉ်း၊နှင့်စင်ကြယ်သောအပြုအမူတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါသည်။ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရိုင်းစိုင်းဖို့အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်မဟုတ်ရင်ချိုးဖောက်အများပြည်သူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသွာလိမ့်မည်မကြာမီအပြစ်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်။ အပြုသဘော၊ဖော်ရွေပြီးပွင့်လင်းလူအကြားအသုံးပြုသူများ၏အကျယ်ပြန့်အများစု။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်မကြိုက်ကြဘူး-လှည့်ဖျားသွင်ကစားတဲ့၏ဦးတည်ချက်အတွက်အသစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အသိအကျွမ်း။ လျှင်သင်အထီးကျန်ဆန်တယ်၊တယောက်မျှမရှိသူပဲ၊ကၽြန္ေတာ္မ မစစ္ေ။ ဖွင့်လှစ်ချက်တင်ကစားတဲ့စကားပြောခန်းကိုပျော်ရွှင်စွာ။ သုံးစွဲသူအများအပြားလို့ပြောပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်ဗီဒီယိုချတ်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလူတို့အနေဖြင့်ယခင်ဝမ်းနည်းမဟုတ်တစ်သဲလွန်စနေဆဲဖြစ်သည်။ နှင့်အဖော်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၏ဆက်သွယ်ရေးခွင့်ပြုမျှဝေဖို့အရင်းနှီးဆုံးနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ပဲပျော်စရာစကားပြောခန်း၊ပင်မထွက်ဘဲနေအိမ်။
မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အပေါ်ချက်တင်မုခ်ချိန်းတွေ့၏။ ရှိပါတယ်၊သင်တန်း၏၊လုံလောက်တဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်သူတစ်ဦးသည်အတွက်မှတ်ပုံတင်ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနှင့်ချိန်းတွေ့ချက်တင်? ရှိပါတယ်၊သင်တန်း၏၊လုံလောက်တဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဘဲမှတ်ပုံတင်သော်လည်း၊အဘယ်သူသည်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်စကားပြောပြီးရော? ဒီသင်လိုအပ်ပွဲနှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့၊ဒါပေမယ့်သာအကြံပေးချက်များ။ ဒီနေရာတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တကယ့်အမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျား၏ဇုန္တွေ့ဆုံရန်သောသူများအတွက်အခမဲ့အပရော။ သင်အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦး၏ဇုန်များအတွက်အခမဲ့။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်မှဂျာမဏီ၊သြစတြီးယား၊ဆွစ်ဇာလန်ရောနဲ့စကားပြောမှာနေ့တိုင်း။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်မပါဘဲန့်သတ်နှင့်အတူအခမဲ့စကားပြောအက္ပ္ကိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အမှန်တကယ်စည်းအဝေးနှင့်သိလာအောင်အသီးအသီးအခြားအလွယ်တကူ။
တူ အတွက်ဂျာမ။ သာအီတလီနှင့်အတူ ။ လတ်ကမ်ချက်တင်ကနေလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဒါဟာသည့်အတွက်ဗမာ၊လူပျော်မွေ့နိုင်ကျပန်း။ လူသစ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ! ကိုယ့်ကိုနှိပ်ပါ"စတင်"ခလုတ်ကိုနှင့်စတင်အကြုံအပြန်အလှန်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ! ရှာတွေ့ကောင်းသောမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အဘို့အသင်၏နောက်အချစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ၡမ်ား၊လှပသော၊ရယ်စရာ၊ဇာတ်၊ချို:သက်သာပျင်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေ။ ဟောပြောရန်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်အပျင်းစရာသို့မဟုတ်သင့်အဘို့အရှာဖွေနေအဘို့အမိတ်ဖက်အခြားအကြောင်းရင်းများ၊အမျိုးအစား"ပြောဆို"။
ခေတ်သစ်ဗီဒီယိုစကားပြောအပြီးပြည့်စုံသောအရပ်မှတည်ထောင်ပြည်ပအဆက်အသွယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်၊သင်တန်း၏၊စုဆောင်းသင့်ရဲ့အိတ်နှင့်ချွတ်ယူစုႏွမှတစ်ဆင့်ဥရောပ၊ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်အချိန်နှင့်ငွေကို။ ချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်မှအလျင်အမြန်နှင့်လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူတော်အတိအကျတူညီဝဘ်စကားပြော၊သင်ပြု။ သို္ေ ချက်တင်-အကစားတဲ့အလွန်လွယ်ကူသည်:ကများ၊ပေါ်တွင်နှိပ်ပါစတင်ပြီးရွေးပါ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဤပြဿနာရှိစေဦး-(ဂ်ာမဏီ)။ ဒါဟာအသံနိုင်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ဒိန်းမတ်ဂျာမန်အစဉ်အမြဲစုံလင်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွက်။ ငါမျက်မှောက်၌ဤငါ၏ကလေးဘဝ၊ငါကြားရ၏ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြှနျုပျကြီးသော-အဖိုးအတွင်းပထမကမ္ဘာစစ်သူကြီးကဖမ်းမိမာန်၊ရှည်လျားအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဆိုပါလယ်ယာ၏အချမ်းသာ ၊ဒါကြောင့်သူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားအတူမိမိအလုပ်ကြိုးစားသူသည်အလမ်းပေးတော်မူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့သူ့သမီး။ အဖြစ်အချိန်တွင်ဖမ်းဆီးရမိ၊ငါ၏ကြီးမြတ်-ဖိုးသားထောင်နှင့်ပင်အနည်းငယ်သားသမီး၊မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ပျက်၊ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းဂျာမန်အစဉ်အမြဲတယ်တလျှောက်တွင်(ဒုတိယကမ္ဘာစစ်-ရေတွက်မထားဘူး)သည်ခိုင်မြဲစွာအမြစ်တွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဘဝအတွက်နှင့်ငါ၏စိတ်ကို။ အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသွားခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံသစ်ပါ။ ငါလိုသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အခေတ်သစ်ဂျာမန်ဆကျသှယျခငျြနှင့်အတူယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ။ ရယ်စရာပြောဖို့၊ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာငါအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသွင်အပြင်:ငါချင်ပျောက်ကွယ်သွားသို့မဟုတ် အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ ကြောင်းဂျာမန်အမျိုးသားများအများကြီးစုံလင်ထက်ငါ့အလွည့္ေရာက္ဖို။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အဖြစ်၊ဂျာမန်ကစားတဲ့အပေါင်းတို့သည်အချိန်ပစ်ငါ့ကိုအမျိုးသားအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်တိုင်းရင်းသား(ခေတ်ဂျာမနီနိုင်ငံသည်သာမာန်ဒါပေမယ့်ဒိန်းယု၊ကီ၊ရပ်)။ ထို့နောက်ပေါ်လာမှအစပြုခဲ့သည်တွင်မိန်းကလေးငယ်များ၊အရာပြီးနောက်ကျွန်မသဘောပေါက်ခဲ့တာကကျွန်မကြီး-ဖိုးထောင်ဂျာမန်အမျိုးသမီးပင်လျှင်တည်း။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍ငါသည်မိမိနေရာ၌အပူဇော်ခြင်းကနေဂျာမန်အဆက်ဆက်မငြင်း:အများစု၏ဂျာမ ။ ခဲ့တော်တော်လျောက်ပတ်။ ငါသည်အပင်ဆိုအမိန့်အတွက်အုပ်စိုးသောသာဒိန္းမရယ်ပဲထင္မိတယ္။ ဂျာမန်ဝဘ်ချက်တင်အဖြစ်လူသိများချက်တင်ကစားတဲ့ဂ်ာမဏီဖွင့်လှစ်ဖို့ကျွန်တော့်အတွက်အခေါ်အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်ရာအားလုံးနှင့်အတူငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ခုလုံးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လံုးခ်င္းအိမ္သူတို့တွင်ပါရှိသောအလွန်အမှတ်မထင်။ သွားဖို့ဂျာမန်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်၊ငါလျော်စွာပြေးတစ်ချက်မှာကွဲပြားလျက်အဝတ်သို့မဟုတ်ညစ်ပတ်။ သို့သော်အခြားဘုန်းကြီးကျောင်း၊အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသူများနှင့်အတူလိပ္ကသင့်မတက်။ ငါဒီေနဘာပြသဂ်ာဗီဒီယိုချက်တင်ကနေဘေးထွက်ဆိုး။ ကျွန်တော်ထင်တာနဲ့တက်သန့်ရှင်းရေးအနည်းငယ်အတွက်ငါ့အခန်း၊ချက်တင်ကစားတဲ့လိမ့်မယ်နောက်တဖန်အဖြစ်ထည့်သွင်းအတွက်ငါရှာရိုက္ႏ၊ ဂျာမဏီကနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခန့်မှန်းရခက်နှင့်ပြည့်စုံ၏အံ့သြဖွယ်။ အခါရှာဖွေရေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုဆုံးရှုံးရပြီအားလုံးမျှော်လင့်၏အောင်မြင်ခြင်း၊ကံကြမ္မာပေးသည်အခြားအခွင့်အဖို့ပျော်ရွှင်စေ။ ဆက်သွယ်ရေးကြားလူအပိုရွေ့လျားသို့အင်တာနက်အနေနဲ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်မှန်။ နှင့်ချက်တင်ကစားတဲ့နှစ်ဆယ်လေးနာရီ(သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအခြားဗီဒီယိုစကားပြော)သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးကိရိယာ၏ဤအဖြစ်မှန်။ အခွင့်အအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ။
ဖြစ်လာ၏အစိတ်အပိုင်းကြီးကြီးမားမား။။။။။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးရီး-"အများဆုံးအိုကေ"ဆု၊အဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊တီဗီစီးရီး၊သီချင်း၊ကပြ၊တိုက်ရိုက်နှင့်အွန်လိုင်းအစီအစဉ်များ၊တေးနှင့်ဘလော့ဂ်များ၏အနှစ်တွင်တင်ပြကြသည်၊ကျွန်တော်မဲများအတွက်အကြိုက်ဆုံးအတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီအမျိုးအစား၊နှင့်သင်၏နံပါတ်များပြပွဲတစ်ခုသီးသန့်သင်္ကေတဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့သူတစ်ဦးအောင်မြင်ခိုက်မှာဒီမှာ။ သာကသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းမသွားအောင်တစ်ဦး၏မေတ္တာကိုသင်္ချာနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်၊ပိုပြီးသူတို့ကိုသည္။ အချို့သားသမီး၊ဒီနည်းလမ်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ပိုမိုထိရောက်သော၊ဖန်တီးသိချင်စိတ်နှင့်မက်လုံးပေးဖို့ပါးစပ်အပြောနဲ့နားလည်ဖော်မြူလာ။ အားလုံးနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုများမှာအပေါ်အခြေခံပြီးသင်္ချာမော်ဒယ်တွေ၊အနိုငျသောလှည့်ကွက်နဲ့အသုံးပြုသင့်အတွက်သင်္ချာနှင့်ဂျီသြမေတြီ။ ယူမိမိတို့အလက်နက်များနှင့်အောင်စိတ်နှလုံးကို၎င်းတို့၏။ ဘယ်လိုမှချက်ချင်းမြှောက်မည်သည့်အရေအတွက်အပေါ်အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုမှာရွေ့လျား။ များပြားတဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်ဂဏန်းနှစ်လုံး၊ရိုးရှင်းစွာတင်စွန်းနှစ်ဖက်၏အနံပါတ်များနှင့်ထည့်သွင်းသူတို့ရဲ့ပေါင်းလဒ်သူတို့ကိုအကြား။ ဥပမာ:လေးဆယ်ငါး?၊ အကြားသူတို့ကိုသင်အဖြေရလိမ့်မယ်။ ဒီစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။ ခံစားရအရာကိုတစ်မူထူးခြားသောအသံဒီအလှတရားရှိပါတယ်။ သင်မည်သို့? သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ရေးဖို့သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်အောက်ကဗီဒီယို
၁။ကြီးမားတဲ့အရေအသုံးပြုသူများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယား၊အပါအဝင်အများအပြားသည်ဒေသခံနေထိုင်သူများ:အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊အနုပညာရှင်များနှင့်ဂီတချစ်သူများ၊ချစ်သူများ၏စွန့်စားမှအလူးဖာ။ စကားပြောလူတိုင်း။ ၂။ ဆိုက်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ အနည်းဆုံးတသိန်းမြန်မာဘာသာ:ပုံမှန်စရိုက်လက္ခဏာများမှာအမြင့်၊အလေးချိန်၊ဝါသနာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများကို၊ဇာတ်ကောင်စရိုက်နှင့်သတင်း။ အဆိုပါရွေးချယ်ရေးစံဖြစ်နိုင်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကျွမ်းကီး။ ၃။သည်အဘယ်မှာရှိဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးကြသည်။ အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေ ၊သူငယ်ချင်းများ၊ရည်းစား။ လူများစွာစီစဉ်ထားပြီးအတုအာ ပြောပြရန်။ ခေသစ်တောများအတွင်းဘူလ်ဂေးရီး၊ကော်ဖီနှင့်ဌာဝိုင်နှင့်အတူအမွှေးအကြိုင်များ၏ပင်လယ်နက်။ ပးပါဒီအပန်းဖြေစခန်းနိုင်ငံ၊လူမည်မဟုတ်ဘဝကိုပျော်မွေ့။ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်အောင်အသစ်အသိဘူလ်။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်။ ပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်ကမ်းလှမ်း၊အဆင်ပြေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတံခါးအားပေးပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်းစာမျက်နှာသင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်အတူအသေးစိတ်ရှာ၊ဓာတ်ပုံများ၊ရေးသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊သာယာသောအစည်းအဝေးနှင့်အများကြီးပို။
ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ပေးတော်မူ၏ထူးခြားသောအခွင့်အရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်ကနေမြို့ဒိန္း။ အခမဲ့တက်လက်မှတ်ထိုး၊ဖြည့်စွက်တစ်ဦးမေးခွန်းလွှာသို့မဟုတ်ပဲရမှတဆင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုမှလူမှုရေး။ ကွန်ယက်များနှင့်အရရာပေါင်းများစွာနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အစည်းအဝေးတွင်ဒိန်းနေ့တိုင်း။ ပါကဒိန္းမယ့်သင့်ရဲ့စီးတီး၊ထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်နှင့်သင်ရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဦးခ်င္းအတွက်အသင့်ရဲ့စီးတီး၊ဥပမာအားဖြင့်၊ချိန်းတွေ့ဂင်အတွက်လည်းအခက်အခဲမရှိဘဲ။ အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာမြို့၏ကျယ်ပြန့်။ ရွေးချယ်သင့်မြို့
အကျွမ်းနှင့်အတူဓာတ်ပုံတွင်ဒိန်း။ တွေ့ဆုံရန်အချို့လူများအတွက်ကိုမှန်ကန်ဓာတ်ပုံများ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
သင်တွေ့လိမ့်မည်သန်းကျော်နှင့်အတူပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံတွေ၏ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး။ အသုံးပြုရှာဖွေရေး၊သင်ရှာကြသည်အတွက်စိတ်ဝင်စားမးခြန္း၊တွေ့ဆုံရန်မှပြောဆိုရန်ကောင်းနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊လွှတ်အိမ်အစည်းအဝေး။ များသောအားဖြင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်ရိုးရှင်းတဲ့စာရင်းစံမ်ား။ ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်အမှုအရာကဲ့သို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဓာတ်ပုံပြခန်းများ၊ချက်တင်၊ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အလိင်ဓါတ်ပုံများ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်သန်းကျော်နှင့်အတူပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံတွေ၏ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး။ အသုံးပြုရှာဖွေရေး၊သင်ရှာကြသည်အတွက်စိတ်ဝင်စားမးခြန္း၊တွေ့ဆုံရန်မှပြောဆိုရန်ကောင်းနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊လွှတ်အိမ်အစည်းအဝေး။ များသောအားဖြင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်ရိုးရှင်းတဲ့စာရင်းစံမ်ား။ ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်အမှုအရာကဲ့သို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဓာတ်ပုံပြခန်းများ၊ချက်တင်၊ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အလိင်ဓါတ်ပုံများ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုသောအတူတကွယှဉ်တစ်ခုတည်းလူကိုလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူအဟောင်းတွေကလူအတွက်ဒိန္း
ဒိန္းသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိ ကျွန်းဆွယ်နှင့်အများအပြားအနီးအနားရှိကျွန်းများ။ ဒါကြောင့်ကပ်လျက်ဆွီဒင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကြောင့်တံတား။ ဂင်၊မြို့တော်ဒိန္း၊နာမည်ကြီးများအတွက်၎င်းတော်ဝင် ၊အရောင်စုံအရွယ်ဆိပ္ကမ္းဧရိယာ၊အပန်းဖြေပန်းခြံ နှင့်ကျော်ကြားသောအနည်းငယ်သာမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း။ ထိုမြို့၏၊အမွေးများ၏ရပ်တည်ချက်မှာခရစ်ယာန် ကေျပာသည္ခရီးသြားမ်ားအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အလယ်ခေတ်စင္တာအတူ လမ်းနှင့်ဝက်-။ လူဦးေဒိန္းငါးနှင့်ဝက်လူဦးရေသန်း
ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ထောက်ပံ့ပေးရန်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရှာတွေ့သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကနေအဂင်မြို့ ဒီချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သောကြာရုံမိနစ်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအတည်ပြုမှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ပုံစံအတွက်ထည့်သွင်းဓါတ်ပုံများနှင့်သင်သို့ခုန်ချပြီး'ကမ္'။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သာအမှန်တကယ်ပရိုဖိုင်း၊ရွပ္အက်ၤ။ တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အပြီးမိနစ်အနည်းငယ်သင်အာရုံစိုက်။ အိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်အမြဲတွေ့မြင်အသုံးပြုသူများအပေါ်။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဝေမျှအပေါ်သူတို့ရဲ့လူမှုရေး။ ကွန်ရက်တစ်ခုမှာကိုနှိပ်ပါနှင့်အတူ။
မေ့ရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုသိ။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အသစ်၏ပုံစံချိန်းတွေ့ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းချက်ချင်းစတင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုမဟုတ်၊အတုအရင်းအမြစ်။ အာရုံစိုက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်နှောင့်နှေးသင်အနည်းငယ်အဘို့အနာရီ၊သင်သာစကားစတင်ပြီးသင်အချိန်ခြေရာခံမဆုံးရှုံး။ သို့သော်သင်သည်လိမ့်မယ်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါချမ်းသာအသိအကျွမ်း။ မေ့ရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုသိ။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အသစ်၏ပုံစံချိန်းတွေ့ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းချက်ချင်းစတင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုမဟုတ်၊အတုအရင်းအမြစ်။ အာရုံစိုက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်နှောင့်နှေးသင်အနည်းငယ်အဘို့အနာရီ၊သင်သာစကားစတင်ပြီးသင်အချိန်ခြေရာခံမဆုံးရှုံး။ သို့သော်သင်သည်လိမ့်မယ်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါချမ်းသာအသိအကျွမ်း။
ဟွန်ကျော်ကြားသည်တစ်အများအပြားပြတိုက်များ၊အထိမ်းအမှတ်၊တစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဘဏ္ဍာရေးစနစ်၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေး။ အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၌ကျင်းပကြသည်နှင့်အတူမြို့ကြီးကြိမ်နှုန်း။ တွေအများကြီးလည်းရှိ၏စိတ်ဝင်စားဖို့အမှုအရာ၏ပရိသတ်များအဘို့စျေးဝယ်ခြင်း၊စားသောက်ဆိုင်များ၊နိုက်။ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးခရီးခြေခံအဆောက်အဦ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်မေ့လျော့မဖြစ်သင့်ကြောင်းဤသည် တဦးတည်းစျေးအကြီးဆုံးစားသောက်ဆိုင်များအတွက်။ မူလကဒါဟာအမှန်တကယ်အတိုက်ထုံးစံအကြားနှင့်၊၊ပြီးနောက်ဤနေရာတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊တစ်ဦးရဲတိုက်နှင့်အပေါ်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု၏ဆွစ်။ ကတည်းက ခဲ့ပြီးတစ်မြို့၊ကပေးထားတဲ့အခွင့်ထူးတစ်ခု၏ရာဇ်နှင့်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်။ နောက်ပိုင်းမှာ၊ပေါ့တ်ဗီလာကိုဘာသာရေး၏ဗဟိုအတက္မႈမ်ား၊နောက်ပိုင်းတွင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နှင့်၎င်း၏တိုးမြှင့်အဆင့်အတန်းအဖြစ်မြို့နှင့်အတူတီထွင်စီးပွားရေးစနစ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြုမလွန်လူနေမှုစွန့်ခွာ၊အဘယ်သူမျှမခြေရာနောက်၊ထိုမြို့မှဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရဇီဗုံးကြီးဌာနနှင့်အရှုံးအတွက်၎င်း၏အရွယ်ဘုန်း။ အဆိုပါပေးအပ်အသွားအလာ၏မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ဘတ်စ်ကားနှင့် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းအလွန်အကျိုးရှိမှကျေးဇူးတင်စကား၊ထံနီးပါးအဘယ်သူမျှမယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု။ ပြီးနောက်သန်းခေါင်၊အထူးညဥ့်အခါဘတ်စ်ကားများစတင်ပြေး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်နေ့စဉ်လေကြောင်းခရီးအချက်များအားလုံးမှကမ္ဘာ၏၊ရထားဘူတာရုံစရန္အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ။ စက်ဘီးကဲ့သို့ခံစားနိုင်ပါတယ်အဓိကပါဝင်သူများ သူတို့တွေအားလုံးလိုအပ်သည့်စက်ရုံ-အထူးတင္၊ရပ္နားရန္ေနရာက်ယ္။ ပြေးအကြားကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏သတိထားပါ။ အကြားအရေပြတိုက်အမျိုးသားပြတိုက်၏အ ၊အစည်းအရုံး၏အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ၊ပြတိုက်။ သေချာဖြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အမွီအော်ပရာ၊နှင့်အဘို့ချစ်သူများ၏ခေတ်ဗိသုကာနှင့်သမိုင်းဝင်ဖန်ဆင်းခြင်း-အမွီအနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်။ နှင့်ဧရိယာ၌ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အားလုံးအမြိုးမြိုးဖျော်ဖြေရေး၊သင်မူကားလည်းဝယ်မှဆက်စပ်အရာဂီတအတွက်ဒေသခံစျေးဆိုင်။ လှပသောမြို့ပြရှုခင်းများနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းဟောင်းမှာသေချာပါသည်အတုနှင့်ထွက်ခွာအနေနဲ့မမေ့နိုင်သောအထင်၏ဤမြို့။ အကျသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သောအခါမှခရီးသွားလာ၊သင်အဆွစ်ဇာလန်တပ်မတော်ဓါးနှင့်အတူကလောင်စမ်း၊တစ်ထိုး၊ထိုးတံ၊ကတ်ကြေးနဲ့တစ်ဦးနှိုးစက်နာရီ။ လမ်းဖြင့်၊ကအလေးသာတစ်ဂရမ်။
Jmorru-sit F'yekaterinburg b'xejn (Sverdlovsk reġjun)
ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုဗီဒီယို တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကောင်လေး ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကြော်ငြာအမျိုးသမီး၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင် အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးလို။ အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုချိန်းတွေ့